Chii chaunofanira kudya kana uine furu (kana dzihwa) uye zvaunofanira kudzivirira - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Info Info, Hutano Dzidzo Wellness Zvipfuwo Nharaunda, Kambani Nhau, Wellness Nharaunda Nhau Hutano Dzidzo, Hutano Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Nhau Zvinodhaka Info Kambani Kambani, Info Info Zvinodhaka Vs. Shamwari Nharaunda, Wellness
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Chii chaunofanira kudya kana uine furu (kana kutonhora)
Chii chaunofanira kudya kana uine furu (kana kutonhora)
Paunenge uchinzwa kusuwa, chikafu chinowanzo kuve chinhu chekupedzisira pane pfungwa dzako. Unogona kungonzwa kusada kudya. Kana kuti pamwe unosvotwa uye pfungwa yekuruma musangweji inoita kuti dumbu rako ritendeuke.
Iwe ungangodaro wakanzwa marudzi ese emazano nezvezvaunofanira kudya kana iwe uine dzihwa kana dzihwa (kana chii kusadya). Zvakaoma kuongorora kuti ndeapi mishonga yekumba inoshanda chaizvo uye ingori nyaya yevakadzi vekare. Unofanirwa here kufudza furu uye kufa nenzara nefivhiri? Dairy inoita kuti iwe uburitse mamwe mamasi? Ginger ale mushonga wese wekugumburisa dumbu here? Ko zvakadiniko neBRAT chikafu?
Zvakakosha kupa muviri wako uye kugara uine hydrated, kunyanya kana iwe uchirwara. Kudya kwakanaka kunobatsira kuwedzera immune system yako. Saka takatarisa nenyanzvi kuti tidzidze zvekudya kana uchirwara uye zvaunofanira kugara kure nazvo.
RELATED: Furu inotora nguva yakareba sei?
Chii chekudya kana uchirwara
Paunenge uchirwara, zvakakosha kuyedza kudya chimwe chinhu , kunyangwe kana iwe usiri kunyanya kunzwa senge. Mune mamwe mazwi, kufa nenzara nefivhiri kunogona kusashanda.
Kana uine hutachiona hutachiona, zvirinani kuedza kudya, anodaro Michael J. Brown, R.Ph ., chiremba wemishonga muLake Oswego, Oregon. Anoti muzvidzidzo, mbeva dzine hutachiona hwehutachiona dzakaita zvirinani padzakapihwa zvekudya kana zvisina kudyiwa. Hosha dzinogona kuitika nemavhairasi, saka kuziya muviri muviri haisi iyo nguva dzese chirongwa chakanakisa.
Asi chii chaunofanira kudya? Ngatitarisei pane zvekudya zvakanakisa kubatsira muviri wako kurwisa hutachiona.
RELATED: Chii chinonzi flu?
Chikafu cheBRAT mabhanana, mupunga, applesauce, uye toast, uye yakakwana kune vanhu vane dumbu rakatsamwa. Zvikafu izvi zviri nyore padumbu uye zvinopa muviri wako kudya kunodiwa, Brown anodaro. Uye zvakare, izvi bland chikafu chakakwira mu carbs uye chakaderera mune fiber, saka zvinogona kubatsira kusunga zvakasununguka zvituru muvanhu vane manyoka.
Zvimwe zvekudya izvo vamwe vanofunga sechikamu cheBRAT kudya zvinosanganisira nyama yakabikwa kana yakabikwa, visi uye oatmeal.
Kana kutonhora kwako kana dzihwa richiuya nehuro inorwadza, iyo yogati inotsvedzerera, yakasviba kugadzirwa inogona kunzwa ichizorodza zvikuru. Kunyangwe zvirinani, tsika dzakararama dzine mapurobioti uye hutachiona-hunosimudzira zvivakwa. Mune imwe kudzidza , mbeva dzakatapukirwa nefuruwenza dzakadya iyo yogati dzakaratidza zvirwere zvekurwisa furuwenza, zvichiratidza kuti tsika dze yogati dzakabatsira miviri yavo kurwisa hutachiona.
Uye bhonasi, yogati ine mapuroteni, ayo anobatsira muviri wako kuchengetedza simba uye simba, saka ndinovimba hauzonzwa sekuparadzwa.
RELATED: 25 maronda ehuro
Zvibereko zveCitrus-zvakaita semaranjisi, michero yemazambiringa, uye clementine - chitubu chakanaka che vhitamini C , iyo yakakosha antioxidant yekusimudzira immune immune.
Kunyangwe kutsvagurudza kuchiratidza kuti chikafu chakapfuma muvhitamini C hachi deredze njodzi yekuwana iyo inotonhora (zvinopesana nekutenda kwakakurumbira), izvi zvekudya zvinogona kubatsira kuita kuti zviratidzo zvako zvinotonhora zvinyorove kana kupfupisa nguva yazvo. Iwe unofanirwa kuzvidya nguva dzose, zvakadaro, nekuti kutanga vhitamini C mushure mekutonhora zviratidzo kutanga hazviite sekuita mutsauko.
Zvimwe zvekudya zvine huwandu hwakanyanya hwevhitamini C zvinosanganisira mashizha emuriwo ane mashizha senge kare, cantaloupe, kiwi, mastrawberry, uye mango. Iwe ungangoda kukanda mashoma eaya mune echando smoothie kuti udzikise huro huro, kana kunwa imwe ichangobva kusvinwa jisi reorenji!
Chikafu chakakwira mu zinc
Chikafu senge oysters, gakanje, huku, nyama dzakaonda, nhokwe, bhinzi dzakabikwa, uye yogati zvese zvakakwirira mune zinc, rimwe divi remasero ezvirwere zvemuviri.
Funga nezve maseru ekudzivirira immune sehutachiona hwekutanga kupindura. Ivo vanoona furuwenza yako semoto unofanirwa kudzimwa. Asi kana vakasiyiwa vari vega, vanozobuda kunze kwekudzora, zvichikonzera kuzvimba kunorwadza uye kune njodzi. Ndipo panopinda zinc. Nekuda kweiyo immune-inosimudzira zvivakwa, zinc iri kunyatso kuverengerwa kune COVID-19 varwere.
Zvidzidzo ratidza kuti zinc inoshanda kuenzanisa immune immune uye inoshanda seyakajairwa anti-kupisa. Kana iwe usingakwanise mudumbu hove uye huku, edza kutora a zinc kuwedzera paunotanga kuona chirwere chinotonhora kana chirwere.
RELATED: Furu inopfura 101
Chii chokunwa kana uchirwara
Kana iwe usingakwanise kuchengeta chero chinhu pasi, hapana chikonzero chekumanikidza kuzvipa iwe pachako, asi zvinonyanya kukosha kuti uzvichengete uine hydrated. [Zvakakosha kunwa zvinwiwa] kunyanya nefivha, kwaunowanzoita kupera simba nekukurumidza, anodaro Susan Zvirinani , MD, chiremba wemhuri muBaltimore. Zvakare, zvinwiwa zvinowanzo kubatsira kubatsira kutapudza iyo yekuwedzera mamasi yaunogadzira nechando, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuifuridzira kunze. Dzimwe nguva zvinwiwa zvemitambo, seGatorade, kana muto zvinogona kubatsira ne hydration - asi zvinwiwa zvakawanda zvemitambo zvine shuga yakawanda uye masobho mazhinji anogadzirwa nekutengesa akakwirira mune sodium. Ive shuwa yekuverenga iyo label, uye funga kuisanganisa nemvura. Kana iwe uchida shuga shoma kuti ikubate iwe, kunwa gorofa soda (seSprite kana gingerale) kwakanaka. Ingova nechokwadi chekuti uri kuwana yakakwana H2O, futi.
Nzira huru yekuwana mvura yako ndeyokunwa tii inopisa. Dzimwe tii dzakabikwa nemvura inopisa dzinogona kubatsira kudzikamisa zvimwe zvekutonhora uye zviratidzo zvehururu zvakare. Sekureva kwaBrown, iyo menthol mu peppermint tii inogona kubatsira kujekesa kuzara kwemhino kana mhino inomhanya. Uye elderberry tii inogona kuita zvakafanana nekuderedza kuzvimba munzira dzako dzemumhino uye kurerutsa mhino dzakazara. Ginger tii inowanzo kurerutsa kushungurudzika uye inogona kutokubatsira kupora nekukurumidza. Ginger tii inogona zvakare kubatsira muviri kurwisa hutachiona hunobatanidzwa nezvirwere izvi pamwe nekudzora kuzara kwemumhuno nepachipfuva, anodaro Brown.
Ive nekuchenjerera, zvisinei, sezvo akawanda ma tii emabhizimusi anogona kunge akawedzera shuga.
Chikafu nezvinwiwa zvekudzivirira kana uchirwara
Kusiyana nesarudzo dziri pamusoro, pane zvimwe zvekudya zvinogona kuita kuti zviratidzo zvako zviwedzere. Heino runyorwa rwezvikafu zvekudzivirira:
Iwe unogona kufunga huku yaamai yakakangwa seyako yaunofarira nyaradzo chikafu, asi kana iwe uchirwara, zviri nani kunamatira kune isiri-ine mafuta akasiyana. Dr. Besser vanoti chikafu chine mafuta senge pizza, mafrimu eFrance, kana chero chinhu chakanyoroveswa mumafuta chakaoma kugaya uye kwete sarudzo yakanakisa yemunhu ane dumbu rakagumbuka.
Zviri kwete ichokwadi kuti zvigadzirwa zvemukaka, zvakaita semukaka, chizi, uye ayizi kirimu, zvinoita kuti muviri wako uwedzere kuwanda. Zvisinei, Dr. Besser vanoti izvi zvekudya zvinogona kunetsa kugaya, saka zviri nani kuti unyatsojeka kusvikira iwe unzwa zvirinani.
Doro uye caffeine
Zvinwiwa zvine doro (waini, doro, doro) kana caffeine (kofi, tii tema, soda) makuru ma-no kune vanhu vanorwara, ingave hutachiona kana hutachiona hutachiona. Kunwa caffeine kana doro zvinogona kukonzera kupera simba . Izvo zvine njodzi zvikuru, kunyanya kana hurwere hwako huchiperekedzwa nekurutsa kana manyoka. Uye zvakare, doro rinogona kupindirana neyako-the-counter kana mishonga yemishonga. Zvichida zvakanakisa kudzivirira izvi zviviri kusvikira iwe wave kunzwa zviri nani.
RELATED: Zvakachengeteka here kunwa doro nemishonga inotonhora nefuru?
chii chinobatsira apple cider vhiniga
Idya nekunwa kuti unzwe zvirinani
Zvakakosha kupa muviri wako uye kugara uine hydrated, kunyanya kana iwe uchirwara. Kudya kwakanaka kunobatsira kutsigira immune system yako kuti ugone kupora nekukurumidza.
Nekudaro, hapana chikonzero chekuisunda kana iwe uchingonzwa kunge usiri kuda kudya. Sekureva kwaDr. Besser, chinhu chakakosha kuchengeta mupfungwa ndechekuti unofanirwa kudya nekunwa kuti unzwe zvirinani.Rega muviri wako uve mutungamiri wako, anodaro.
Saka, kana iwe usinganzwe kuda kudya, usadaro. Zvingangodaro, muviri wako uchakuudza kuti utore chidimbu chechigunwe kana mbiya yemuto wehuku nguva refu isati yapera. Chero bedzi iwe ukagara uine hydrated uye usingaende usina kudya kwenguva yakareba, iwe unogara wakachengeteka. Uye kana iwe uchinzwa nzara, edza chimwe chezvikafu zvakanyorwa pamusoro.
Trintellix vs.Viibryd: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Mishonga inonyanya kufarirwa mumaguta epamusoro makumi mashanu eU.S.
sei kubatsira nzeve hutachiona marwadzo muvakuru
maitiro ekurapa mbiriso hutachiona muvakadzi
inogara kwenguva yakareba sei b b
ndeupi musiyano uripo pakati pekubviswa uye nekubuda muhomwe max
chii chinoitika mushure mekutora hurongwa b
nzvimbo dzekuwana mahara mapiritsi ekudzivirira kubereka